မိုးစက်လေးမှသိရသော ပြောင်းမလား သုန်းမလား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » မိုးစက်လေးမှသိရသော ပြောင်းမလား သုန်းမလား။
မိုးစက်လေးမှသိရသော ပြောင်းမလား သုန်းမလား။
Posted by အဘ ဘုတ်ကလုံ on Nov 10, 2013 in Think Different | 16 comments
မြန်မာမယ်ကို နိုင်ငံရေး အရ သဘောမကျကြဟု သိရသည်။ သတိလဲ ထားမိသည်။
သဘာကျခြင်းမကျခြင်းက ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။ အထူးဆိုရန်မရှိ။ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာ မယ်ကို မဲပေးခြင်း၊ မပေးခြင်းသည်လဲ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုသာဖြစ်ပေမည်။
သို့သော်လဲ မြန်မာမယ်နှင့် ပြိုင်ဘက် ဖိလစ်ပင်းမယ်အား မဲပေးရန် ဆော်သြခြင်းကတော့ တစ်ဘာသာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာမယ်ကို Report တင်သည်ဟုပင်ကြားရသည်။ မဖြစ်နိုင်ဟု ပြော၍လဲ ခက်မည်။ အခု အပြုအမူများက ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားနေသည်မလား။
ဤတွင် မြန်မာများ၏ တွေးခေါ်ပုံကို သတိထားမိသည်။ ဤသည်မှာ မိမိအလိုမကျမှု တစ်ခုရှိလျှင် အကျိုးရှိလာနိုင်စရာရှိသည့် ကိစ္စ တစ်ရပ်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သည့်စရိုက်။
မြန်မာအများစု(နိုင်ငံရေးသမားများအပါအဝင်) သည် နိုင်ငံတကာရေစီးများနှင့် ဓလေ့များအား ယဉ်ပါးမှုအားနည်းသေးသည်မှာ ငြင်းရန်မလိုချေ။ရလာဒ်အားဖြင့် ဒီလို လုပ်ရပ်တွေကို တွေ့ရတော့သည်။ သူတို့စိတ်ထဲ ဒီမီဒီယာတွေ၊ ဒီပွဲတွေကို အလွန် သမာသမတ်ကျသည်ဟု ထင်ပုံပေါ်သည်။ မီဒီယာ ဆိုသည်မှာ အသံတိတ်သေနတ်မှန်း မသိကြသေး။သူတို့ပြောင်းဝက ကိုယ့်ရင်ဘတ်ဖက်မှာ။ အဲ့ဒါကို မျောက်က ကပြရင်း ပျော်ပြသလို ဖြစ်နေသည်။
ရုပ်ပြစားသည့်ခေတ်တွင် အနည်းဆုံး ဟန်ကိုယ့်ဖို့တော့ ရှိသင့်သည်မဟုတ်လား။ အခုတော့ အိမ်တွင်းပြဿနာအားလုံးကို အပြင်ထွက်အထုပ်ဖြေပြသည်။ ရလာဒ်မည်သို့ ရှိမည်ထင်ပါသနည်း။
တိုင်းပြည်သိက္ခာဟူသည် ပြည်သူ၊ပြည်သား တို့စည်းလုံးမှု၊ သဘောထားကြီးမှု တို့အပေါ် များစွာမူတည်သည်။ အစိုးရနှင့်ပြည်သူ စည်းလုံးလျှင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
အခု အစိုးရနှင့်ပြည်သူ အစေးမကပ်ရာမှ တိုင်းပြည်နစ်နာပြီး လူအထင်သေးခံဖြစ်နေရသည်။ မစည်းလုံးသောတိုင်းပြည်က လာသည့်လူကို မည်သူက အထင်ကြီးမည်နည်း။
တိုင်းမ်သတင်းစာတွင် ဂျူလီယံအဆန်းကို ဘာကြောင့် မရွေးပါသနည်း။ အယ်လ်ဂျားဇီးယားက ခပ်စိတ်စိတ်ဖော်ပြသော သတင်းများ CNN, BBC တို့တွင် မတွေ့ရဘဲ ဖြစ်သည်မှာ ဘာကြောင့်နည်း။ အဖြေက ရှင်းသည်။ ဒီမီဒီယာများသည် သူတို့နိုင်ငံအကျိုးအတွက်အဓိက။ဒါကို ကိုယ်က မျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုသည်။ ဒီမီဒီယာတွေကိုသာ တရားသူကြီးလို ထားလျှင် မှားပေမည်။
ယနေ့ခေတ်အင်အားလွန်ဆွဲမှုများသည် အသွင်ပြောင်းလာနေပြီ။ ထိုအထဲတွင် မီဒီယာ အဓိက ပါသည်။ မီဒီယာ စစ်ပွဲ အတွက် နေနေသာသာ ကိုယ်တို့ဆီမှာ သတင်းသမားများနှင့် ပြန်ကြားရေး ရန်ဖြစ်လို့မဝ သေး။
ကိုယ်တွေ ပါးနပ်ရမည်။ ဒါမှ နယ်နိမိတ်လိုင်းများ မှိန်ဖျော့လာသည့်ခေတ်တွင် ရှင်သန်မည်။ ဒါဝင့်သီအိုရီလိုပါပဲ။
Credit to : Myo Set
ဟိုဒင်းတွေနဲ့ ဟိုဟာတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့မဝသေး တဲ့
မီးကို လူတွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးချနိုင်သလို၊ အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါပြောဖူးသလို Tool အဖြစ်သုံးမလား Weapon အဖြစ်သုံးမလားပေါ့။ အခု ကျနော်တို့ဆီမှာ မီဒီယာကို Weapon အဖြစ်သုံးတာများလာတာ သတိထားမိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူများကြိုးဆွဲတာမခံဘူး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သူတွေများတယ်။ အခုတော့ ဝိုင်ဘက်ကနေ မီတာခဘက်ကို ပြောင်းသွားကြပြီ။ ဒါပြီးရင်ဘာလာမလဲတော့ မသိဘူး…
သားလေး ကိုလံဘတ်လည်း အဘဘုတ်ဆိုလိုချင်တဲ့ သဘောတရားကို
တော်တော်လေး ထိထိမိမိသိနေတာပဲကွယ့်။ ဂျာနယ်စောင်ရေ ရောင်းတက်ဖို့
ဖွမယ်၊ မတည့်တဲ့ လူတွေ အဖွဲ့အစည်ဆို ချွန်မယ်။ Weapon အဖြစ် ဆေးမြီးတို
သုံးနေတော့ ကမ္ဘာမီဒီယာဘက်ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကို အားမစိုက်ကျတော့ဘူးလေ။
ဒီအတိုင်းဆို နွားခြေရာခွက်မှာပဲ သုန်းသွားဖို့ များနေပြီ သားလေးကိုလံဘတ်ရေ…
အဘဘုတ်တို့တော့ ဥပေက္ခာတရားအားတွေ တဖြည်းဖြည်းကောင်းအောင် ကျင့်ခဲ့ပြီးပါပြီကွယ်..။
သားလေးတို့လဲ အဲ့တရားလေးတွေ နှလုံးထုံကြကွဲ့။
သားလေးခန့်ခန့်။ ။ ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးကွဲ့။
အဘဘုတ်အမြင်တော့ အစိုးရက အပျော့ဆွဲ ပြောင်းနေတာ။
မီဒီယာကတော့ လုပ်သမျှ မကောင်း ဖွတော့။ အပျော့လည်းဆွဲတာ
မကောင်းပါဘူး။ အပြင်းဆွဲရင်လည်း စစ်အာဏာရှင်လက်ထဲပြန်ရောက်မှာဆိုတော့
သားလေးရယ် မြန်မာပြည်ရာဇ၀င်မှာ အာဏာရှင်တွေ ပွဲချင်းပြီး သေသွားမှသာ
သုန်းပြီးမှ ပြောင်းတာ ပိုကောင်းလေမလားလို့။
WOW ကလွဲလို့ကျန်သူအားလုံး………… အဘဘုတ်ကလုံကပြောနေဘီ…သားလေးWOW တဲ့ ဟီးဟီးဟီ့း
” မိမိအလိုမကျမှု တစ်ခုရှိလျှင် အကျိုးရှိလာနိုင်စရာရှိသည့် ကိစ္စ တစ်ရပ်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သည့်စရိုက်။”
ဒီစကားလုံးက သိပ်များမှန်နေသလားလို့…။ ကျန်တာ မပြောတတ်ပါ.။
သားလေးဝါးဝမ်းရေ.. မှန်တာလေး ဟိုက်လိုက်စ် လုပ်ပေးထားထက်
မပြောတတ်လည်း ကိုယ့်အမြင်လေးလည်း ချပြပါလားကွယ်။ ဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့။
သားလေးဝေါင်း အားလုံးသေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူး။ တော်ကြာ မြန်မာပြည်ပျက်မှ
အဘဘုတ်မှာ အိုကြီးအိုမနဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ သွားကပ်နေရဦးမယ်။
လောကမှာ အစွန်းတရား၂ပါးရှိတယ်တဲ့ . . . . .
ညာဘက်အစွန်းတရားကတော့ ပြောင်းခြင်းပါဘဲ ဒဲ့ . . .
ခလိုအနီ၊ အပြာ၊ အ၀ါ၊ ခလိုသက်တန့်တွေနဲ့၊ ကျစ်ဆံတွေ၊ မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့
တစ်မျိုးလုံး၊ တစ်ဆွေလုံးကို ချစ်တဲ့ အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ပြောင်းကြတဲ့ လမ်းပေါ့။
ဘယ်ဘက်အစွန်းတရားကတော့ သုန်းခြင်းပါဘဲ . . .
ဟိုဟာ၊ ဒီဟာတွေ စိုးရိမ်ရတယ် တို့နဲ့
. . . . . . . . . . ပြီး သုန်းမဲ့ လမ်းလေ။
အလယ်လမ်းကတော့ ပြောင်းခြင်းလဲမဟုတ်၊ သုန်းခြင်းလဲမဟုတ်တဲ့
ပြုန်းခြင်း ဆိုတဲ့လမ်းပါဘဲ မောင်နှမလေးတို့ရယ်။
ပြုန်းနေတဲ့ဝက်အူ(ကြက်အူနှင့်လှည့်သော ကြက်အူမဟုတ်ပါ) ကို ဘယ်လောက်လှည့်လှည့်
ရှေ့လည်းမတိုး ၊ နောက်လည်းမဆုတ်
တစ်လတစ်၊ တစ်လတစ် နဲ့ အလယ်လမ်း ပြုန်းပြုန်းလေးကို ဘဲ ကြိုက်ပါတယ်ကွယ် . . .
မဇ္ဈိမပဋိပဋာကွဲ့.. အလယ်အလတ်လမ်း အကောင်းဇုံး.. အစွန်းမလိုက်နဲ့.. အလယ်ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်..
Phoe Lay Ni says:
စာလေးကို တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲကွယ် ။ ဒါနဲ့ မြေးလေး ဘုတ်ကလုံကရော မိုးစက်ဝိုင်ကို ကြိုက်လား ။
သူမှ အဘဖြစ်ချင်လို့ အသက်လေး ငယ်ငယ်ကို နာမည် အဘတတ်ထားတာ။
အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ မြေးလေးခေါ်တာပေါ့ကွယ်။ ဘိုးဘိုးနဲ့မှ မြေးအရွယ်ကိုး။
အင်း အဘဘုတ်ကို ကလေးမတို့ သံသယများနေကြပြီထင်တယ်။ သံသယများမှလည်း မြန်မာပီသမှာပေါ့ကွဲ့။
မရှင်းပြလည်း ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ တခြားသူတွေ စိတ်ရှင်းသွားအောင်
အဘဘုတ်ရှင်းရပါ့မယ်။ ၁။ အဘဘုတ်အသက်က ကိုယ့်ကိုယ်အဘ
ခေါ်သင့်တယ်အရွယ်မှာပါကွယ်။ (ကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် အဘပြောတာမဟုတ်တာကိုတော့
၂။ သမီးလေး KZ အသက်ငယ်တယ်ထင်နေတာ လူဟောင်းထင်နေတာက
အဘဘုတ်က ရွာက တချို့လူတွေရဲ့ အကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းသိနေတယ်ထင်လို့
ထင်တယ်။ စပ်စုတတ်ရင်တော့ အကုန်သိရပါတယ်ကွဲ့၊ ဥပမာ ရွာက ဦးကျောက် မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာ
အဲ့လောက်ထိတော့ အဘဘုတ်လည်း ရွာစာအမြဲဝင်ဖတ်နေသူဆိုတော့ သိသပေါ့။
ဖေ့ဘုတ်သုံးတော့လည်း ရွာထဲက ကလေးတွေ၊ကလေးမလေးတွေ အပြန်အလှန် ပြောနေတာကြည့်ရင်း
အဘလည်း ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းလေးတော့ သိတာပေါ့။
၃။ အဘဘုတ် ဒါတွေ သေချာတယ်ဆိုတာတော့ အဘဘုတ်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်အနေအထားအရ
privacy ထားတာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါကွယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကို ဟပြပေးမှ ရွာထဲ စာဆက်ရေးခွင့်ရမယ်ဆိုလည်း
အဘဘုတ်ကို အားမနာတမ်းသာ ငြင်းလိုက်ပါကွယ်။
၄။ ဖိုးလေးနီရေ..။ မိုးစက်ဝိုင်ကို မကြိုက်တဲ့ အဘတွေ မြန်မာမှရှိလို့လားကွယ်။ ရှိရင်ခေါ်ပြပါကွယ်
အဘ က အဘ ပါပဲ အဘ ရယ် …။
ဒါ့ထက် ဘုံကလုံ ဆိုဒါ ဘာများဒုံး …
အင်တာနက်ပေါ် ရှာကျိလိုက်ဒါဒေါ့ …
ဒါဘဲ တွေ့လာဒယ် …